Jeneraly Camille Vital : « Atsaharo ny antsojay atao amin’ny mpanohitra… » | NewsMada
Jeneraly Camille Vital : « Atsaharo ny antsojay atao amin’ny mpanohitra… »
Hentitra ny Praiminisitra teo aloha, ny Jly Camille Vital manoloana ny raharaham-pirenena. « Amin’ny maha mpitarika ny Hiaraka isika ahy sy maha mpikambana anay eo anivon’ny Armada, avoahy tsy misy hataka andro ny minisitra Andriamananoro Augustin. Takinay koa ny hampitsaharan’ny fitondrana ny fanaovana antsojay ny eo anivon’ny fanoherana. Manana zo hiteny ny tsy mety izahay… Aoka koa tsy ho herim-pamoretana ny mpitandro filaminana fa ho mpiaro ny vahoaka sy ny fananany », hoy izy tamin’ny antso an-telefaonina nifanaovana taminy, omaly. Notsiahiviny koa fa mitondra any amin’ny fanilikilihana na natao hikendrena olona ilay lalàn’ny fampihavanam-pirenena nolanin’ny Antenimiera farany teo iny. Ahiana hitondra any amin’ny korontana indray aza, araka ny nambarany. Nohitsiny fa hitondra any amin’ny fipoahan’ny sarom-bilany raha mitohy izao tranga miseho eto amin’ny firenena izao.
Anisan’ny tsy levon’ny vavon’ny Jly Camille Vital ny fanajana ny soatoavina tamin’ny nisamborana ny minisitra teo aloha, Andriamananoro Augustin teny amin’ny fasana. Tsy mazava aminy koa fa ny zandary hatrany no manao ny hetsika rehetra, toy ny fisamborana na samy eo anivon’ny Emmo miaraka amin’ny polisy sy ny tafika aza izy ireo. « Amin’ny fotoana hanamarihana ny andro iraisam-pirenena ho an’ny zon’olombelona no niseho ny tranga… Ireny izao nisy olona akaiky ny fitondrana nampanantsoin’ny manampahefana fa tsy nipoitra… Miaina amin’ny firenena inona isika ? », hoy ihany izy.
Notanisainy koa ireo olana ara-tsosialy iainan’ny vahoaka amin’izao fotoana izao nefa tsy nahitam-bahaolana. Eo ohatra ny delestazy sy ny tsy fahampian’ny ranon’ny Jirama, tsy voavaha, ny tsy filaminana sy tsy fandriampahalemana… « 56 taona aty aorian’ny niverenan’ny Fahaleovantena, tsy mahafehy sy tsy mahay mitantana ny firenena isika. Ireo firenena niara-nihira amintsika anefa efa lasa lavitra. Mivaona any amin’ny tsy izy ny firenena ary very tanteraka… Ho aiza ireo tanorantsika ireo ? », hoy ny Jly Camille Vital.